Indlu Yangaphakathi Yodonga, Iphaneli Yaphansi, IBhodi Yesikebhe - IGoldrain
Iphaneli Yephansi ye-WPC
Iphaneli Yephansi ye-SPC
Hlola izitezi ezintsha
Indoor Yokuhlobisa Wall Panel
Iphaneli yodonga lwe-SPC, ebizwa nangokuthi i-Fast Install Wall Panel, iyinto entsha eluhlaza yokuhlobisa ingaphakathi. Idizayinelwe ngokukhethekile ukufaka esikhundleni semikhiqizo yendabuko yonke yamaphepha, upende nezinto ezenziwe ngokhuni.I-wallboard ye-SPC yinto entsha evumelana ne-eco ehlanya ngokuhlangana okuyingqayizivele kocingo lwenkuni futhi manje epulasitiki ngokobuchwepheshe obuphezulu. Inikeza izinzuzo ezinhle kakhulu zepulasitiki nezinkuni. Isingeniso Ibhodi langaphakathi lodonga I-Aseptic indwangu yobuciko eyakhiwe kabusha odongeni ibhodi ekhethekile etholakalayo e-villa, castle, man ...
WPC Wall Indoor Wall
I-WPC Yokuhlobisa I-Wallboard Isingeniso: I-WPC Yokuhlobisa I-Wallboard-kusuka ekubunjweni, umbala, kanye nokwelashwa kwendawo kunikeza ukukhetha okwenziwe okomuntu ngokwakhiwa, ngemigqa ebushelelezi, imibala ecebile, nemiphumela emihle kakhulu yemvelo yemizwa. Umnyango wokuhlola ochwepheshe unqume ukuthi unezici zokungapendi, ukuvikelwa kwemvelo, ukuvimbela ilangabi, ukuvimbela amanzi, i-mothproof, anti-corrosion, umswakama-proof, nokufakwa okulula. Uchungechunge lwemikhiqizo lunokushisa okukhulu kwe-insu ...
Okuhlobisa i-SPC Wall Board
Isingeniso Sokusebenza Kwensimbi ye-SPC: Amaphaneli Wodonga we-SPC — kusuka ekwakhekeni, umbala, kanye nokwelashwa kwendawo ahlinzeka ukukhetha okwenziwe okomuntu ekwakhiweni, ngemigqa ebushelelezi, ngemibala ecebile, kanye nemiphumela emihle kakhulu yemizwa yemvelo. Umnyango wokuhlola ochwepheshe unqume ukuthi unezici zokungapendi, ukuvikelwa kwemvelo, ukuvimbela ilangabi, ukuvimbela amanzi, i-mothproof, anti-corrosion, umswakama-proof, nokufakwa okulula. Uchungechunge lwemikhiqizo lunokushisa okukhulu kwe-ef ...
SPC okuhlobisa Wallboard
Isingeniso se-SPC sokuhlobisa i-Wallboard: I-SPC Wallorative Wallboard-kusuka ekwakhekeni, umbala, kanye nokwelashwa kwendawo kunikeza ukukhetha okwenziwe okomuntu ngokwakhiwa, ngemigqa ebushelelezi, imibala ecebile, nemiphumela emihle kakhulu yemvelo yemizwa. Umnyango wokuhlola ochwepheshe unqume ukuthi unezici zokungapendi, ukuvikelwa kwemvelo, ukuvimbela ilangabi, ukuvimbela amanzi, i-mothproof, anti-corrosion, umswakama-proof, nokufakwa okulula. Uchungechunge lwemikhiqizo ine-insulatio enkulu yokushisa ...
Ama-Panels e-Wall Wall e-Eco-friendly
Umklamo wobungcweti i-Honor & Certification Authority Ngethimba lomsebenzi elinolaka, ubuchwepheshe bokukhiqiza obuthuthukile, ukumaketha okusebenzayo kanye nekhwalithi esezingeni eliphezulu yamakhasimende, iGoldrain iba wudumo oluphezulu emphakathini. I-Eco-friendly 3D Wall Panels Bamboo fibre wall panel yenziwa ngokhuni oluyimpuphu, i-bamboo powder kanye nemvelo ephezulu ye-polymer material.Iyinto entsha yemvelo enobungane engekho i-formaldehyde, engeyona enobuthi. Bamboo fibre odongeni panel m ...
I-WPC Wall Panel engenamanzi
Ubuchwepheshe bokukhiqiza obuthuthukisiwe Sineqembu labaphathi elineminyaka engaphezu kwengu-10 yesipiliyoni ekukhiqizeni iphaneli, ukuthengisa nokumaketha. Ukuqinisekisa ikhwalithi ephezulu nomkhiqizo wenoveli sithuthukise iqembu lethu lobuchwepheshe. Sisebenzisana nabaqambi nabaqambi abahlukahlukene ukwanelisa isidingo samakhasimende ethu avela kuwo wonke umhlaba. Umklamo wobungcweti i-Honor & Certification Authority Ngethimba lomsebenzi elinolaka, ubuchwepheshe bokukhiqiza obuthuthukile ...
I-Wall Wall Engacimi Umlilo
Isingeniso I-Fireproof Wall Panel wuhlobo olusha lwezinto zokwakha ezihlobisa, ezisetshenziswa kakhulu ekufakweni kwemodeli yangaphakathi kwabendlu nabomphakathi. Iphaneli lodonga elihlanganisiwe lingasetshenziswa ezikhathini ezahlukahlukene, kufaka phakathi igumbi lokudlela lendlu, igumbi lokulala, igumbi lokuphumula, igumbi lokugezela, igumbi lasekhishini, kuvulandi, udonga lwasemuva kwe-TV, ihhotela, indlu yangasese, indawo yokuzijabulisa, igumbi lomhlangano, indawo yokwamukela izivakashi nokunye. Izinzuzo Ezingacimi Wall Iphaneli yenziwa ngoqalo lwemvelo nokhuni lwensimbi, ukukhanya kwe-calcium carbonat ...
Isingeniso I-Indoor WPC Wall Panel wuhlobo olusha lwezinto zokwakha ezihlobisa, ezisetshenziswa kakhulu ekufakweni kokumodela kwangaphakathi komndeni nomphakathi. Iphaneli lodonga elihlanganisiwe lingasetshenziswa ezikhathini ezahlukahlukene, kufaka phakathi igumbi lokudlela lendlu, igumbi lokulala, igumbi lokuphumula, igumbi lokugezela, igumbi lasekhishini, kuvulandi, udonga lwasemuva kwe-TV, ihhotela, indlu yangasese, indawo yokuzijabulisa, igumbi lomhlangano, indawo yokwamukela izivakashi nokunye. Isingeniso Uqalo nokhuni oluhlanganisiwe lwedonga lwenziwe ngoqalo lwemvelo nezinkuni zokhuni, li ...
Isingeniso Interior 3D Wall Board obizwa nangokuthi WPC Wall Panel, okuyinto uhlobo entsha oluhlaza futhi elula umhlobiso impahla okungaba ukuhlanganisa ukuvikelwa kwemvelo, ukushisa ukwahlukanisa, umswakama-ubufakazi, ukushisa ukulondolozwa, ukuvimbela umlilo, ukwahlukanisa umsindo, imfashini nezinye izinto. Isingeniso I-3D Wall Board iyimboni evelayo, i-eco-friendly futhi ingavuselelwa kabusha, imikhiqizo yochungechunge lwe-WPC ayinakho ukunamathela, zero formaldehyde njll futhi izophinda ihlanganise ...
Iphaneli ye-3D Wall
Isingeniso I-Indoor WPC Wall Panel wuhlobo olusha lwezinto zokwakha ezihlobisa, ezisetshenziswa kakhulu ekufakweni kokumodela kwangaphakathi komndeni nomphakathi. Iphaneli lodonga elihlanganisiwe lingasetshenziswa ezikhathini ezahlukahlukene, kufaka phakathi igumbi lokudlela lendlu, igumbi lokulala, igumbi lokuphumula, igumbi lokugezela, igumbi lasekhishini, kuvulandi, udonga lwasemuva kwe-TV, ihhotela, indlu yangasese, indawo yokuzijabulisa, igumbi lomhlangano, indawo yokwamukela izivakashi nokunye. Isingeniso Udonga oluhlanganisiwe lwe-bamboo nokhuni lwenziwe ngemvelo ...
Isingeniso Indoor Wall Panel ebizwa nangokuthi i-Indoor WPC Wall Panel, enziwe ngoqalo lwemvelo nofibre wokhuni, ukukhanya kwe-calcium carbonate, i-polymer resin nezinye izinto ezisizayo, ukungeza ilangabi elibuyisa ilangabi lokushisa okuphezulu, kunezincazelo ezintathu: iphaneli ye-groove, flat ibhodi le-arc, ibhodi lendiza. Umkhiqizo usebenzisa i-resin yokunamathisela ifilimu ebusweni, okuyize futhi ngaphandle ngqo. Futhi i-WPC Wallboard ikhishwe ekukhuleni kwemvelo kwe-bamboo fiber, iyisihlanu semvelo f ...
I-Stone Plastic Composite Paneling
IntroductionStone Plastic Composite Paneling SPC Interior Wall Glass Panels Bamboo Fiber Pane is a new eco-friendly green interior decoration material, it is a porous structure PVC panel covered by UV-resistant coating .The main material is PVC, bamboo powder, wood flour, calcium i-carbonate, izinhlaka ze-polymer. isetshenziswa kakhulu ehhotela, endaweni yokudlela, esibhedlela, esikoleni, e-villa, ezindaweni zokuzijabulisa nakwezinye izindawo zomphakathi. Uma kuqhathaniswa nezinto zendabuko, Inzuzo ar ...
Izibonelo zokwakhiwa kwangaphakathi
Shijiazhuang Goldrain Co., Ltd. yasungulwa ngo-2010. etholakala Shijiazhuang edolobheni, Isifundazwe Hebei. Ungumhlinzeki we-Indoor Wall Panel futhi uzibophezele ekuhlinzekeni izixazululo zangaphakathi zokuhlobisa zabasebenzisi bomhlaba.
Ngemuva kweminyaka engaphezu kwengu-10 yentuthuko eqhubekayo kanye nezinto ezintsha, i-GOLDRAIN isibe ngumkhiqizi ohamba phambili nowaziwa umhlaba wonke wase-Interior Wall Panels. Emkhakheni wokukhiqiza iWallboard yasendlini, IGOLDRAIN isungule ubuchwepheshe bayo obuholayo kanye nezinzuzo zomkhiqizo. Ikakhulukazi emkhakheni we-wpc wall paneling, i-spc wallboard, i-flooring ne-skirting, i-GOLDRAIN isiphenduke uphawu lomkhiqizo waseChina.